Bursa မြန်နှုန်းမြင့် Mobilization Ankara! 'Bursa ထိုက်တန်ပါတယ်' RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaAnkara ရှိ Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှုပ်ရှားမှု! 'Bursa ထိုက်တန်'
Ankara ရှိ Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှုပ်ရှားမှု! 'Bursa ထိုက်တန်'
06 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Ankara Bursa မြန်ဆန်ရထားစည်းရုံးခြင်း Bursa ထိုက်တန်ပါတယ်
Bursa မြန်နှုန်းမြင့် Mobilization Ankara! 'Bursa ထိုက်တန်'; Bursa အမတ်များသည် Ankara ရှိ Bursa Fan Club Association မှစီစဉ်သောအစည်းအဝေးကိုလည်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
AK ပါတီလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် Bursa လက်ထောက် Ahmet Kılıçak, AK ပါတီဌာနချုပ်နိုင်ငံရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများဒုသမ္မတ Mehmet Tunçak, ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးချုပ်အကြံပေး Harun Akın၊ AK ပါတီ Bursa လက်ထောက် Mustafa Özgin, CHP Bursa လက်ထောက်များ၊ Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, MHP လက်ထောက်ဥက္ကChairman္ဌနှင့် Bursa လက်ထောက် Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Good Party ၏ဒုတိယဥက္ကand္ဌနှင့် Bursa လက်ထောက် mailsmail Tatlıoğlu, Good Party ၏ဒုတိယဥက္ကChairman္ဌနှင့် Bursa လက်ထောက် Ahmet Kamil Erozan, အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်စက်မှုနှင့်ဓာတုစက်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကY္ဌ Yasin Akdere၊ စွမ်းအင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Sefa Uslu၊ RUMELİSİADသမ္မတÖmer Kumova၊ BEBKA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး imsmail Gerim၊ Bursa အသင်းဥက္ကPresident္ဌ metsmet Kazancı၊ တရားသူကြီးများနှင့်Bursalıအရာရှိများနှင့် Ankara မှဖိတ်ကြားသော guests ည့်သည်များစွာ ကိုယ်။
Bursa Fan Club အသင်းဥက္ကthe္ဌ Ali Ademoğluကအစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားရာတွင် Bursa သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုမရရှိနိုင်ကြောင်း၊ Burkara the ည့်သည်ကိုဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်းပါတီမှအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။
RUMELİSİADဥက္ကPresident္ဌÖmer Kumova က Bursa တွင်စက်မှုထွန်းကားခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပြသနာများအတွက်အဖြေများရှိသင့်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်။
အမတ်များ၊ ဗျူရိုကရက်နှင့် NGO များသည်အခြေခံအဆောက်အအုံ၏အမြင်များ၊ အထူးသဖြင့်မြို့၏ပြproblemsနာများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရှင်းပြသည်။ မြို့တော်တံဆိပ်ကိုဆွေးနွေးစဉ်အင်ကာဘီရှိနိုင်ငံရေးပါတီများမည်သို့ပင်ရှိပါစေစည်းရုံးရေးနှင့်စည်းလုံးမှုအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသသင့်သည်။ (အဆိုပါ Bursadabug)
Bursa စီးပွားရေးပို့ကုန်ကင်ပိန်း Continues
Trabzon Way ကိုကင်ပိန်းအပြည့်အဝမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Continues
Trabzon Way ကိုကင်ပိန်း Continues
Bakan Arslan: ”Yüksek Hızlı Tren Seferberliği…
Tren Makinisti Kursu'na Katılmaya Hak Kazanan…